Mayelana NATHI - Foring Import & Export Co., Ltd.
Foring Ngenisa & Export Co., Ltd. yasungulwa ngo-2004. Inkampani yethu ithole i-ISO 9001: 2006 ne-ISO 14000. Siqongelele ulwazi olunothile lokuthekelisa imikhiqizo emihle yamakhemikhali yaseChina. Ngokuya ngesitshalo sethu esinamandla, siyakwazi ukusekela iSulphur Black kanye nabaxhumanisi bayo emakethe yaphesheya.
Inkampani yethu inaka ukuqeqeshwa kwabasebenzi, abasebenzi bezamabhizinisi abanamakhono ekusebenzeni kwezinhlobo ezahlukahlukene zebhizinisi lemikhiqizo yamakhemikhali. Sinikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo ngesikhathi samakhasimende ethu. Inkampani inethemba lokufuna ukuthuthuka nabangani abavela phesheya kwezilwandle nabasekhaya ngokusekelwe ekubambisaneni okulungile nasezinzuzweni zombili. Sihlala sinamathela emikhubeni yezohwebo yamazwe omhlaba, sinamathela ezinkontilekeni, sigcina isethembiso, insizakalo esezingeni eliphakeme, ukuzuza ngokunye nokuwina ifilosofi yebhizinisi, ngebhizinisi, imboni, umkhakha wezezimali usungule ubudlelwano obuningi bokusebenzisana, ngobudlelwano obuseduze bezohwebo neChina futhi imakethe yamazwe omhlaba. Inkampani yethu ifuna ukufuna ukuthuthuka nabangani abavela phesheya kwezilwandle nabasekhaya ngokusekelwe ekubambisaneni okulungile nasezinzuzweni zombili.
I-FORING ikhipha imikhiqizo yamakhemikhali emihle yaseChina. Isitshalo sethu sinendlela yobuchwepheshe obuphezulu yokukhiqiza iSulphur Black B, iSulphur Black BR, 2,4-Dinitrochlorobenzene ne-2-Amino-4-nitrophenol. Indawo yesitshalo ingamamitha-skwele angama-7000 ngokukhishwa kweSulphur Black minyaka yonke cishe ngamathani ayi-10,000 ngonyaka. Inokutshalwa okuphelele kwama-dollar ayizigidi ezingama-36 nabasebenzi abangaphezu kwama-300.
Ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye namakhasimende avelele, sithole inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela eSingapore, ePakistan, eVietnam, eNdiya kanye nasemazweni amaningi eYurophu.